IXiaomi Black Shark 2 sele inegama elisemthethweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kule veki inye umhla wokubhengezwa kweXiaomi Black Shark 2 wabhengezwa. Uphawu lwaseTshayina lulungiselela ukwazisa ngokusesikweni isizukulwana sesibini se-smartphone yalo yokudlala. Umnyhadala wokubonisa oza kubakho ngo-Okthobha 23, njengokuba sele sikuxelele. Icandelo leefowuni zemidlalo likhula ngokukhawuleza, kwaye uphawu lwesiTshayina lunethemba lokumilisela esi sixhobo kwilizwe liphela.
Umzali umzali UXiaomi akazukuyibiza ngegama ifowuni Xiaomi Black Shark 2. Endaweni yokuba inkampani ize negama elahlukileyo kwesi sizukulwana sitsha somdlalo we-smartphone. Kwaye eli gama sele livelile kule mpelaveki.
Ngubani igama elikhethwe ligama laseTshayina? Kubonakala ngathi Iya kuba nguXiaomi Black Shark Helo. Nangona okwangoku ayisiyonto iqinisekiswe ngokusemthethweni. Akukho datha kwizizathu ezikhokelele uphawu oludumileyo lokufaka elo gama kwisixhobo sayo.
Nangona kubonakala ngathi umbono kukuthintela ukudideka kubathengi bamanye amazwe. Kuba kufuneka kukhunjulwe ukuba isizukulwana sokuqala sale nto UXiaomi Black Shark khange abenayo ngokusungulwa kwamazwe aphesheya. Imodeli yesibini iya kuba yeyokuqala ukufikelela kuninzi lwamazwe angaphandle kweAsia.
Kodwa, kunjalo, sinethemba lokuba inkampani ngokwayo iya kusiqinisekisa ngakumbi ngesi sixhobo. Kuba ngokuqinisekileyo ligama elinomdla, linokuvelisa umdla phakathi kwabasebenzisi. Nangona iXiaomi Black Shark Helo ingeyiyo into eqinisekiswe ngokusemthethweni kwicala lenkampani.
NgoLwesibini, umhla we-23 ka-Okthobha, iya kuba sisindululo esisemthethweni sefowuni kumsitho owawuse China. Emva koko sinokwazi konke malunga nayo, kubandakanya nomhla wokukhutshwa kwayo kumazwe aphesheya. Ke siya kujonga kakhulu kulomnyhadala uzakusishiya nawo. Ngokuqinisekileyo uphawu lwaseTshayina lusishiya ngemodeli enomdla kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Kutyhilwe igama elinokwenzeka leXiaomi Black Shark 2
Izicelo zokubukela iimovie ezoyikisayo simahla kwiHalloween